Maitiro ekugadzira mutengi munhu: matanho aunofanirwa kutora | ECommerce nhau
Maitiro ekugadzira mutengi persona
Encarni Arcoya | | ECommerce kudzidziswa
Fungidzira kuti iwe wagadzira bhizinesi repamhepo, chitoro umo iwe wakaisa zvese zvako zvekunyepedzera nemari yako, uye kuti izvo zvauri kuda kuti ivo vatenge zvakawanda kubva kwauri. Asi kana isu tikakubvunza iwe kuti ndiani akakodzera mutengi, iwe hauna zano rakawanda uye iwe unopindura nenzira yakajairika iyo chero munhu. Izvi zvinongoreva kuti iwe hauna kutsanangudza vatengi vako, ndiko kuti, iwe hauzive maitiro ekugadzira munhu mutengi.
El mutengi persona ndechimwe chinhu chakafanana nemumiriri weuyo wako akakodzera mutengi angave, urikuenda kunaani nzira dzako dzese dzekutengesa kuti usvike kwaari. Asi chii chaizvo chiri icho mutengi persona? Iwe unogadzira sei mutengi persona? Uye ivo vanonyatso shandira kuvandudza nzira yekutengesa? Tinoda kutaura newe nezve zvese izvi uye zvimwe zvakawanda pazasi.
1 Chii chinonzi mutengi persona
2 Nei uchigadzira mutengi persona
3 Maitiro ekugadzira mutengi persona nhanho nhanho
3.1 Tsanangura zvinodiwa
3.2 Nhoroondo yako mutengi persona
3.3 Simbisa zvaunokwanisa uye zvausingakwanise
3.4 Gadzira yako mutengi persona
Chii chinonzi mutengi persona
Usati waziva maitiro ekugadzira mutengi persona, zvakakosha kuti uzive zvatiri kureva nezveichi pfungwa uye nekuchinzwisisa pamwe nekugona. Mutengi persona iri «mutengi persona», dai taizoridudzira zvakananga.
Ndicho hunhu hweizvo isu zvatingatarise semutengi akakodzera kwatiri. Mune mamwe mazwi, uye sekureva kwaHubspot, ichave iri "semi-yekunyepedzera inomiririra yako akakodzera mutengi."
Nekuti zvakakosha? Zvakanaka, fungidzira kuti urikuzovhura online online chitoro. Vatengi vako vanofanirwa kuve vana, asi ndizvo zvazviri chaizvo here? Kunyangwe zvigadzirwa zvako zvakanangana nekadiki imba, chokwadi ndechekuti mutengi wako haasi vana, asi vabereki veavo vana, avo vari kunyatso kuve ivo vanotenga kubva kwauri. Naizvozvo, kana uchimisikidza zano, haugone kuzvisimbisa pakunyora "kwevana" asi kune "vabereki."
Iyo modhi inogadzirwa inogadzirwa kuburikidza ruzivo nezvevashandisi chaivo, kuziva maitiro avanoita nezvinhu zvaunoisa pakutengesa, kana vachizvida, kana zvisiri, kana zvakanaka kubheja pazviri, nezvimwe. Chaizvoizvo, iyo ruzivo iwe yauchazove ndeye: demographic dhata, yemunhu mamiriro, maitiro nezve kutenga, nezvimwe.
Nei uchigadzira mutengi persona
Iye zvino zvaunenge uchiziva zvishoma nezve ichi pfungwa, unogona kushamisika kuti nei uchifanira kuchigadzira. Uye kunyangwe zvisiri pachena kwauri kuti zvakanaka here kana kuti kwete, kana kuzviita sei, kukosha kwemunhu mutengi aripo, uye ndekwechokwadi. Kwete chete iyo inokubatsira iwe kutsanangura zano rako, asi zvinoita kuti kuyedza kwako kwese kuenda mukutungamira kweavo vateereri vateereri iwe waunayo, ndiko kuti, ndiani angave anofarira mune izvo zvaunotengesa.
Asi, pamusoro peizvozvo, iwe unowana:
Ipa zvirimo zvakakwana kune vatengi vako. Hazvina kufanana kuti iwe enda kune vateereri vechidiki pane munhu mukuru, kana mukuru.
Tsanangura matanho ehukama hwako nevatengi. Mune ino kesi, iwe unozokwanisa kumisikidza maitiro ekukwezva, kugutsa uye kuchengetedza mutengi iyeye. Uye iwe uchangozviita chete kana iwe uka "taura mutauro mumwe chete." Isu hatisi kureva chokwadi chekutaura mutauro mumwe chete, asi kuti iwe unzwisise zvinodiwa nemutengi uye kuti iwe unopa mhinduro kune izvo zvavari kutsvaga.
Iwe unenge uine makiyi ekuziva kuti ndeipi nzira yekutaurirana yekushandisa Boka rega rega revanhu rinowanzo kuve munzvimbo imwe kana imwe. Naizvozvo, kuziva kuti ndeipi nzira yekutaurirana yaunoshandisa kunokubatsira kuti usatambise nguva pane izvo zvisina kukodzera, kana kuti chako chinangwa mutengi chiripo ipapo zvishoma.
Bhizinesi rako rese rinotarisa kune wako mukuru mutengi. Hazvireve kuti haugone kutengesa kune vamwe vatengi; asi ichokwadi kuti "grosso" yako ichave iri uye, nekudaro, rako rese zita rinotsvaga kunzwira tsitsi munhu iyeye, iye mutengi anozvizivisa nechiratidzo (ndiyo nzira yakanakisa yekuzadzisa kuvimbika).
Maitiro ekugadzira mutengi persona nhanho nhanho
Kunyangwe zvingaite senge zvisingaite, chero munhu anogona kugadzira mutengi persona. Kuti uite izvi, pane nhevedzano yematanho iwe aunofanirwa kufunga nezvayo kuti mhedzisiro ive yakanyanya kukodzera. Izvi ndeizvi:
Kunyanya, isu tinotaura nezve izvo zviri izvo zvaunoda iwe zvine chekuita nevatengi vako. Ndokunge, chii chaunofanira kuziva nezvazvo. Zvinogona kunge iwe uchingoda chete kuziva kana ivo vabereki, kana vasina kuroora kana kuroora, zera ravo, nezvimwe. Kunyange chiri chokwadi kuti ruzivo rwakawanda rwuri nani, iwe unofanirwa zvakare kutarisa kune iwo akanyanya kukosha data.
Uye sei kuwana iyo data? Zvakanaka kune izvi iwe unogona simudza boka revanhu vaunotsvaga navo chigadzirwa chako chitsva. Imwe sarudzo ndeyekuhaya masevhisi emakambani anobata kuunganidzwa kwedata uye wozviwana zvichibva pachinangwa chako.
Imwe sarudzo ndeyekutora iro ruzivo kubva kune vako vatengi. Nenzira iyi iwe unozogadzira dhatabhesi pamwe nevanogona kushandisa izvo, nekuwedzera, iwe unogona kuvaka kuvimbika (nekuti kana vakakutenga kamwe, vanogona kufarira mumwe).
Nhoroondo yako mutengi persona
Iye zvino une ruzivo rwese rwaunoda kuti ugadzire mutengi wako persona. Asi iri "mbishi" ruzivo. Iye zvino unofanirwa kunyatso ziva akakosha mapoinzi eiyo ruzivo. Mune mamwe mazwi, isu tiri kutaura nezvekusimbisa izvo hunhu hweavo vangangove mutengi vari.
Simbisa zvaunokwanisa uye zvausingakwanise
Paunenge iwe watsanangura yako mutengi persona, zvakakosha kuti uzive, kune rako bhizinesi, chauri chaicho uye chii chaunotadza. Iwe unofanirwa kusimbisa Ndeapi masimba ebhizinesi rako uye nekushaya simba, ndiko kuti, iwo mapoinzi maunofanirwa kushandura zvinhu kuitira kuti iyo vatengi gutsikana newe.
Gadzira yako mutengi persona
Iye zvino iwe unongofanirwa kupfupisa ruzivo rwese iwe rwaunofanira kupedzisa. Kune akawanda matemplate aunogona kushandisa ayo anokubatsira iwe kuti uone izvo zvinonyanya kukosha kwauri, saka kana usati wambozviita kare, unogona kuzvishandisa nguva shoma dzekutanga.
Asi yeuka, mutengi persona hachisi chinhu "chakatsiga" asi chiri kuchinja. Pachave nenguva apo iwe uchafanirwa kusiyanisa kana kugadzirisazve pfungwa iyi kuti uenderane neshanduko dzinomuka. Muchokwadi, zvinogona kunge zviri izvo zvekuti iwe unogadza mutengi persona uye boka idzva rine simba rinobuda mubhizinesi rako, saka uchafanirwa kudzoreredza zano rako kuti utarise pane iyo inogona kukupa iwe zvakanyanya mabhenefiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » ECommerce kudzidziswa » Maitiro ekugadzira mutengi persona